‘प्रेमप्राप्तिका लागि गरिने प्रार्थना हो गजल’ – Chitwan Post
‘प्रेमप्राप्तिका लागि गरिने प्रार्थना हो गजल’
प्रकाशित मिति: शनिबार, कार्तिक ११, २०७४
गजलकार नवराज निर्वाहको जन्म आजभन्दा लगभग ३५ वर्षअघि चितवनको पार्वतीपुरमा भएको हो । औपचारिक शिक्षामा उनले अंग्रेजी साहित्यमा स्नातकोत्तर गरेका छन् भने उनको पेसा शिक्षण हो । उनी ‘कर्मी नाट्य समूह’, ‘अराजक अक्षर समूह’लगायतका संस्थामा आबद्ध छन् । निर्वाहका रचनाहरु विभिन्न पत्रपत्रिकामा फुटकर रुपमा प्रकाशित छन् भने उनी विभिन्न साहित्यिक प्रतियोगितामा पुरस्कृत पनि भएका छन् । उनको प्रकाशोन्मुख कृति ‘निर्वाह चल्छ’ गजलसङ्ग्रह हो । उनी हाल एक श्रीमती र एक छोरीका साथ भउमनपा–११, बसेनीमा बस्छन् । प्रस्तुत छ, चितवन पोष्ट दैनिकले गजलकार नवराज निर्वाहसँग गरेको स्रष्टासँग संवाद :
१. गजल लेखनयात्राको सुरूवात कहिलेबाट र कसरी गर्नुभयो ?
– कहिलेदेखि गजल लेख्न थालियो भन्ने हेक्का छैन । २०५८ सालतिर चितवनमा पहिलो रेडियो सिनर्जी एफएम सुरू भएपछि गजल सुनिन र मन पराइन थालियो । एक किसिमको मिठास र आनन्द पाइन थालियो, अनि सुन्दासुन्दै आफूलाई नि गजल फुर्न थालेछ । लेखेपछि एफएममा पठाइने गरिन्थ्यो । त्यहाँ गजल वाचिन थाल्यो । साथीभाइले तैँले लेखेको गजल सुनियो नि यार एफएममा भन्दै आउथेँ अनि झन् लेख्न थालियो ।
२. आफ्नो साहित्यिक प्रेरणाको स्रोत के र कसलाई मान्नुहुन्छ ?
– ठ्याक्क यही व्यक्तिको कृतिले भन्दा पनि मलाई बालकुमारी माविमा नेपाली पढाउने गुरूवर डा. लक्ष्मणप्रसाद गौतम र गुरूआमा सरस्वती रिजालका कर्र्णिप्रय स्वरमा लय हाली पढिएका कविता अनि मनै छुने गरि विश्लेषण गरिएका साहित्यका विभिन्न विधाहरुले साहित्यप्रति झकझकाएको थियो । र अझ भन्नुपर्दा, मातृवियोगका कारणले आफूले खाएका हण्डरहरु, भोग्नुपरेका तीता र नमीठा कथाव्यथाका अनुभवहरुलाई कागजमा पोख्दापोख्दै अहिले लेख्ने लत बसेको छ ।
३. तपाईंको विचारमा साहित्य के हो ? साहित्य कसका लागि हुनुपर्दछ ?
– मलाई लाग्छ, साहित्य समाजको ऐना हो जसलाई कागजी समतल सतहमा विभिन्न रुपमा उतारेर आनन्द लिने र दिने काम गरिन्छ ।
मेरो व्यक्तिगत भोगाइमा भन्नुपर्दा मचाहिँ आफ्नै आनन्द र सन्तुष्टिका लागि लेख्छु र त्यसलाई पढेर अनुरागीहरुले पनि आनन्द लिनुहुन्छ होला । तर, अहिले पनि प्लेटोले भनेजस्तै देश, समाज र व्यक्ति सुधारक हुनुपर्दछ भन्ने मान्यता नि रहिआएको छ ।
४. चितवनका साहित्यिक गतिविधिमा कत्तिको सहभागी हुने गर्नुभएको छ ?
– चितवनमा साहित्यसँग सम्बन्धित धेरै नै कार्यक्रमहरु हुँदै आइरहे पनि कार्यव्यस्तताले गर्दा मनले चाहँदाचाहँदै पनि सोचेजति उपस्थित हुन पाइरहेको छैन । अध्ययनको सिलसिलामा काडमाडौँमा बिताइएको एक दशक अवधिमा चाहिँ उल्लेख्य रुपमा निकै चाखका साथ साहित्यिक बसाइँहरुमा गएर उभिने गरिन्थ्यो । अहिले आफू जान नभ्याइएका कार्यक्रमहरु प्रत्यक्ष अथवा रेकर्डको माध्यमबाट साहित्यिक तिर्खा मेट्ने गर्दछु ।
५. गजल विधाबाट प्रेमरस व्यक्त गर्न सजिलो हुन्छ भन्छन्, युवा गजलकारहरु । यसमा तपाईंको अभिमत के रहेको छ ?
– एकदम, यसमा दुईमत नै देखिँदैन । गजलका सुरूवाती इतिहासलाई हेर्दाखेरि गजलको मुख्य उद्देश्य नै प्रेमरस, प्रेमभाव पस्कनु र पोख्नु हो । गजल कुनै सुन्दर नारीप्रति मोहित भएर उसको रुपको बयान गर्दै लेखिएको साहित्यिक रुप हो । नारीसँग गरिएका प्रणयवार्ता हो । प्रेमिकाका विषयमा कुराकानी हो । गजल आफैँमा प्रेमिल छ । स्रोता र पाठकलाई चरप्प बाँधेर मादकता दिने खालको हुन्छ । यसमा प्रयोग गरिएका काफिया, रदिफ, रूक्नहरुको श्रृंगारिक तालले बेताल बनाई उडाइदिन्छ प्रेमिल दुनियाँमा ।
६. साहित्यमा गजललाई ‘रूने माध्यम’ पनि भनिन्छ । के गजलबाट स्रष्टाहरु रून सक्छन् ?
– रूनेमात्र नभई रूवाउने विधा पनि भन्छु म त । प्रेमको भीख माग्न गरिने आलाप हो गजल । फुक्र्याइँ हो गजल, धुक्र्याइँ हो गजल । प्रेमप्राप्तिका लागि गरिने प्रार्थना हो गजल । ‘तिमीबिना मरिहाल्छु आउ बचाऊ’ भनी मागिने गुहार हो गजल । प्रेमरस भरिएको प्रेमिकाको मुहार हो गजल । प्यास हो गजल । प्यासी हो गजल । पानी हो गजल । आगो हो गजल । अब आफैँ भन्नुस्, रूने हो कि हँसाउने माध्यम हो गजल ?
७. मोतीराम भट्टकालीन नेपाली गजल र हालको नेपाली गजलमा गुणस्तरको हिसाबले कत्तिको फरक अनुभव गर्नुहुन्छ ?
– कलकल बगेको स्वच्छ, स्निग्ध नारायणीमा बाढी आउँछ, पानीको मात्रा बढ्छ, हाँ हाँ र हुँ हुँ गर्दै सब बढार्छ । तर, नारायणीको सुन्दरता र शालीनतामा ह्रास आउँछ । हो, त्यस्तै भेद छ मोतीकालीन गजल र हालको गजलको गुणस्तरमा । तर, अहिलेका गजलका सबल पक्ष भनेको विषयवस्तुको विविधता हो । संगीतको समिश्रण गरी गाइने र विभिन्न विद्युतीय माध्यममा दोहोरिरहने कारणले गजल अहिलेका युवापुस्तामाझ लोकप्रिय बनिरहेको चाहिँ पक्कै हो ।
८. अंग्रेजी साहित्य र नेपाली साहित्यको स्तरमा केकत्तिको भिन्नताको अनुभव गर्नुहुन्छ ?
– अंग्रेजी भाषा एउटा माध्यम भाषा हो, जुन संसारका अधिकांश देशहरुमा प्रचलित छ । अंग्रेजी भाषाको पहुँच धेरै भएकाले यस भाषामा लेखिएका साहित्यको साहित्यिक दायरा नेपाली साहित्यको तुलनामा निकै फरक छ । गुणस्तरको कुरामा नेपाली साहित्य पनि साहित्यानुरागीहरुको प्यास मेटाउने खालको नै छ भन्नुपर्दछ ।
पोखरेली उनी रैछिन् म चितवनको
तालको कुरा गरिनँ मैले हरियो वनको
मुस्कानमा माछापुच्छ«्रे टल्काउँदै बोल्दा
हात्ती, गैँडा, मृग, मयूर नाचे मेरा मनको
रुपा, फेवा, बेगनासझैँ शान्त र शालीन
देवघाटमा देख्दा आभास आफ्नोपनको
सिग्लेसको गुराँस शिरमा साह्रै सुहाएको
लाठी नाच सौराहामा मारिन् एक फन्को
सेतीसरी जीउडाल फुक्दै, सुक्दै, लुक्दै
वाल्मीकिले आश्रम गई बयान गरे तनको
बाबा ! चाहिन्न नाइस टुक्रे फेमेली
बिदामय बनेको नेपाल